ထုတ်ကုန်စက်ရုံ - တရုတ်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများ
နှစ်ထပ်ဝိုင်ယာကြိုးများ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဝက်အူကုပ်များသည် အလွန်အသုံးဝင်ပြီး ကြီးမားသော ကုပ်ကြိုးများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။အသုံးပြုရအဆင်ပြေသည်၊ ကုပ်အချင်းကိုချိန်ညှိရန် ဝက်အူကိုထုတ်ပြီး တင်းကျပ်ပါ။စက်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် အိမ်သုံးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ဖိအားကို လျှော့ချရန်နှင့် ရေပိုက်ကို ကာကွယ်ရန် ကူညီပေးသည်။
1. အတွင်းမျက်နှာပြင်တွင် ဆုပ်ကိုင်ထားသော အတောင်နှစ်ခုပါရှိသည် 2. ချိန်ညှိမှုမှ ကွေးညွှတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဘောလ်များကို အားဖြည့်ထားပြီး 3. ပိုက်များ OD ကို တိကျစွာ တိုင်းတာပါ 4. ကလစ်များအတွက် torque တန်ဖိုးများသည် ခြောက်သွေ့သော bolts များအပေါ် အခြေခံထားသည်။ဘော့များပေါ်တွင် ချောဆီအသုံးပြုခြင်းသည် ကုပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Double Bolt clamps အရွယ်အစားစာရင်း
Shijiazhuang Donghuan malleable သံ Casts Co., ltd သည် အရွယ်အစားအားလုံး ရေပိုက်ကုပ်၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။အဓိကထုတ်ကုန်များ- အမေရိကန်ရေပိုက်ကုပ်၊ ဂျာမန်ပိုက်ကုပ်၊ ဗြိတိန်ပိုက်ကုပ်များ၊ လက်ကိုင်ပိုက်ကုပ်၊ လေးလံသောရေပိုက်ကုပ်၊ ရာဘာတန်းစီထားသောပိုက်ကုပ်၊ တစ်ခုတည်းနားပိုက်ကုပ်၊ နွေဦးပိုက်ကုပ်။
Compressed air transfer၊ pneumatic ကိရိယာများနှင့် pneumatic စနစ်များကို ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းရှိ ရေစနစ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပန်းမာန်စိုက်ခင်းများတွင်။
ထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောအဖွဲ့ရှိသည်။တင်ပို့ခြင်းမပြုမီအဆို့ရှင်အား QC ဌာနမှ တစ်ခုပြီးတစ်ခု စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် တိကျသောအရွယ်အစား၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် တင်းကျပ်မှုများရှိပြီး ဓာတ်ငွေ့၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်နှင့် ရေနံပိုက်များချိတ်ဆက်မှုတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။သင့်တွင် သင့်ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်း သို့မဟုတ် နမူနာရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းအတိုင်း ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
အသေးစိတ်အချက်များ 1.Malleable သံပိုက်ကုပ်များ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကို EN-GJMB-300-6 ၏ ဆန့်နိုင်အား အနိမ့် 300 N/mm2 နှင့် elongation min 6% ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် စစ်မှန်သော tensile strength သည် အများအားဖြင့် 300 ထက် ပိုမြင့်ပါသည်။ 330 သို့ရောက်ရှိပြီး ရှည်လျားမှုသည် 8% အထိရောက်ရှိနိုင်သည် ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းသည် EN-GJMB-300-6 နှင့် EN-GJMB-330-8 အကြားဖြစ်သည်။2. အသုံးပြုမှု- သံမဏိပိုက်များ ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသော ပျော့ပျောင်းသော သံပိုက်ကုပ်များ ကိရိယာများ ၊ မတူညီသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို စံ tu...
Hinged Pipe Clamp, American Standard Fittings များ, လျောက်ပတ်တယ်။, ဝက်အူဖြင့်ပိုက်ကလစ်, Hose With Coupling, အလူမီနီယမ်ပိုက် တပ်ဆင်မှုများ,